I-cosmogony: kuyini, izici, izinganekwane nezindaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngethemu cosmogony. Kubhekiswa ezinganekwaneni ezahlukahlukene ezichaza ngemvelaphi yokuphila emhlabeni. Igama elithi cosmogony, ngokwesichazamazwi, lingabhekisa emfundisweni yesayensi egxile ekuzalweni nasekuguqukeni kwendawo yonke. Kodwa-ke, ukusetshenziswa okuvame kakhulu okunikezwayo ukusungula uchungechunge lwezindaba ezinganekwane ngalo.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-cosmogony nokuthi kuthiwani ngemvelaphi yendawo yonke.
1 Yini i-cosmogony
3 I-cosmogony ngesiko lamaGrikhi nelamaShayina
Siyazi ukuthi imvelaphi yendawo yonke inzima kakhulu futhi ngeke yaziwe nge-1000% ngokuqinisekile. Kunemibono eminingi, ukuqhuma okukhulu kuthinteka kakhulu. Ukusetshenziswa okuvame kakhulu kwe-cosmogony kungama-akhawunti wezokwelapha wokuvela nokuzalwa kwendawo yonke. Ngaphakathi kwalo, izinganekwane nezinsumansumane zakha izindaba lapho onkulunkulu bencika khona ezimpini ezahlukahlukene futhi bezabalaza ukuzala indawo yonke. Lolu hlobo lokulandisa belukhona ezinganekwaneni zaseSumeriya naseGibhitheuku. Lokhu kusho ukuthi ibaluleke kakhulu emlandweni futhi isidlule emasikweni amaningi.
Kunezinhlobo eziningana ze-cosmogony futhi zenziwe yizinhlobo eziningi zamasiko kuwo wonke umlando. Ngokuvamile, ngamunye wabo unomsuka ofanayo wendawo yonke futhi kuyisiphithiphithi. Ngaphakathi kwesiphithiphithi kukhona izinto ezihlanganiswe ndawonye futhi ukuhleleka ukubonga ukungenelela kwamandla angaphezu kwawemvelo noma onkulunkulu. Khumbula ukuthi okuningi kwe-cosmogony akugxili kwisayensi nhlobo. Ngakho-ke, akufanele badidaniswe nesayensi yezinkanyezi.
Kuluhlu lwezindaba nezinganekwane eziqondiswa emcabangweni wesenzo se-cinephilia sendawo yonke ngokusebenzisa izimpi nezinganekwane lapho onkulunkulu babebhekene khona okwaholela ekudalweni kwendawo yonke nasemhlabeni.
Okokuqala kunakho konke ukuthi wazi ukuthi izifundo ze-cosmogony zifundani. Kungashiwo ukuthi inhloso ukutadisha imvelaphi nokuvela kwemithala nezigaba zezinkanyezi ukuze kutholakale ubudala bendawo yonke. Kodwa-ke, ngalokhu, kuncike kusethi ye- izinganekwane, ifilosofi, ezenkolo nezesayensi ngemvelaphi yendawo yonke. Uzama ukusungula ingxenye yemibono yakhe kusayensi, kepha uma kukhulunywa ngokuthembela ezindabeni ezinganekwane futhi, unenkolelo encane.
Igama elithi cosmogony ligcizelela ekuqondisisweni kwemfundiso yenkolelo yokuqala komhlaba okuthi, ngokolwazi olukhona manje kanye nemibono eyamukelwe, ihlobene kakhulu nombono we-big bang. Futhi ukuthi i-cosmology nayo ifunda ngesakhiwo samanje sendawo yonke.
Ake sibone ukuthi yiziphi izici eziyinhloko ze-cosmogony:
Iqukethe inani elikhulu lezinganekwane eziphikisanayo. Lezi zinganekwane ziguqulwa ngokuqhubeka kwempucuko futhi namuhla azisafani nakuqala.
Banezinkolelo-ze eziningi kanye nokufana yezinhlamvu zezinganekwane nezaphezulu ezinemvelaphi yendawo yonke.
Kwakukwamukelwa okuhle kakhulu eGibhithe futhi kwakusetshenziswa kabanzi ukuqonda nokuzwakalisa inani elikhulu lamandla okudala onkulunkulu ababenawo.
Ngokusebenzisa i-cosmogony asikwazi ukubuyela emzuzwini wokuba khona kwangaphambili noma ngezinxushunxushu zoqobo lapho umhlaba wawungakakhiwa khona.
Zama ukuthola indlela yokusungula iqiniso ngokubona kwendawo yonke, isikhala kanye nemvelaphi yonkulunkulu. Khumbula ukuthi izama ukuchaza yonke into ngokusho ama-goodbyes ahlanganiswe nesintu nezinto zemvelo ezikwenzayo.
Zonke izinkolo zine-cosmogony engabonakala ngenqubo yokudala noma yokuvela.
Igama ngokwalo ligxile ekutadisheni kokuzalwa komhlaba.
Impucuko yokuqala yabantu eyayikhona yayine-cosmogony eyayifuna ukuchaza izinto zasemhlabeni nezasemkhathini ngezinganekwane. Kuleli gatsha "lesayensi" kuphuma inani elikhulu lezinganekwane ngemvelaphi nezimbangela zezinto ezahlukahlukene zemvelo.
I-cosmogony ngesiko lamaGrikhi nelamaShayina
Siyazi ukuthi inkolo ngayinye inohlobo lwe-cosmogony. Endabeni yesiko lamaGrikhi, lalakhiwa iqembu lezindaba ezazinezinkolelo nezinganekwane eziningi zempucuko yamaGreki mayelana nemvelaphi yendawo yonke kanye nomuntu. Ukuvela kweTheogony ye- UHesiod wayengumthombo oyinhloko wokhuthazo lwalenganekwane kanye nezinkondlo ze-Iliad ne-Odyssey. KumaGreki, ukuqala komhlaba kwaba nesiyaluyalu esikhulu ngaphakathi kwesikhala lapho umhlaba, umhlaba ongaphansi nesiqalo saqala khona. Umhlaba wawuyikamelo lamazinyo, umhlaba ongaphansi wawungaphansi komhlaba futhi umgomo yikhona okhuthaze ukuxhumana phakathi kwezakhi ezahlukahlukene zendaba.
Kuzo zonke izinxushunxushu kuvela ubusuku nobumnyama. Lapho ehamba ndawonye, ​​ukukhanya nemini kwadalwa. Le yindlela abazama ngayo ukutshela ukudalwa komhlaba ngezinganekwane.
Ngakolunye uhlangothi, sineCosmogony yesiko lamaShayina. Umqondo owawukhona eChina waveza umbono kaKai t'ien okwakuwumbhalo owawubhalwe cishe ngekhulu lesine leminyaka BC Lo mbono waqinisekisa ukuthi umhlaba usicaba ngokuphelele futhi womabili ahlukaniswe ibanga elingu-80.000 li (eyodwa li is okulingana nengxenye yekhilomitha). Ngaphezu kwalokho, lo mbono waqinisekisa ukuthi ilanga lalinobubanzi obungu-1.250 li futhi lalihamba liyisiyingi esibhakabhakeni.
Siphinde sibe ne-cosmogony yobuKrestu lapho sinemvelaphi yomhlaba kuGenesise, okuyincwadi yokuqala yeBhayibheli. Nakhu ukuthi kanjani uNkulunkulu uYahve waqala ukudala umhlaba ekuqaleni. Ukudalwa kuyinqubo eyenzeka ngokuhlukaniswa komhlaba namazulu, umhlaba namanzi, nokukhanya ebumnyameni. Lokhu kusho ukuthi umhlaba wenziwe ngokuhlukanisa izinto eziqala kusuka kwisiphithiphithi esikhulu kakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-cosmogony nezifundo zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-cosmmony